Galmudug iyo Hirshabbeelle oo Raadina Nin gaystay dil yaab leh Xili Shir Nabadayn ah loo fadhiyey | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Galmudug iyo Hirshabbeelle oo Raadina Nin gaystay dil yaab leh Xili Shir Nabadayn ah loo fadhiyey
Muqdisho ( Kalshaale ) Ciidamada ammaanka maamulada Hir-Shabeelle iyo Galmudug ayaa wada baadhis wadajir ah oo ay ku raadinayaan nin saakay dilay mid kamid ah dadka deegaanka Bacda oo aan sidaa uga fogeyn Degmada Matabaan.
Ninka dilka geystay ayaa baxsaday sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah dadka deegaanka, waxaana goobta gaaray Ciidamada ammaanka oo bilaabay baaris ay ku raadinayaan gacan ku dhiiglaha.
Xiliga dilka uu dhacay waxaa loo fadhiyay gogol xal looga gaaraya dilal ka dhacay Deegaanno hoostaga Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan sida ay Mustaqbal u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah.
Dagaalka iyo dilalka aanooyinka la xiriira ee ka taagan deegaannada u dhaxeeya DG Hir-Shabeelle iyo Galmudug ayaa salka ku haya dhul daaqsimeed iyo Barkado biyaha laga siiyo Xoolaha oo muranka ka bilawda uu gaaro deegaannada ka fog halka ay wax ka dhacaan.
Saraakiisha Booliiska Hir-Shabeelle Iyo Galmudug ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in ay gacanta kusoo dhigaan ninka dilka geystay iyo koox kale oo la socotay, maadaama la bargartay, isla markaana ay heleen xogtooda.
Gobollada Dhexe iyo Badhtamaha Soomaaliya waxaa maalmihii lasoo dhaafay kusoo kordhay dilalka beelaha oo ay geysanayaan maleeshiyaad hubeysan, waxaana barbar socda kulamo lagu soo afjarayo xiisaddaas oo sababtay dhimasho, dhaawac & welwel lasoo dersay dadka deegaanka.